Sunday April 28, 2019 - 10:26:05 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Waxa loogu yeero beesha caalamka ayaa markii ugu horraysay magaalada Muqdisho ku qabanaysa shir caalami ah oo laysugu keenayo Wadaada xumayaasha ka barbar shaqeeya duullaanka reergalbeedku ku qaadeen wadamada caalamka islaamka.
Wasaaradda Warfaafinta Dowladda Federaalka ayaa sheegtay in maalinta Berri ah uu garoonka diyaaradaha Muqdisho ka furmi doono shir ay ugu magac dartay "Shirka amniga Fikirka iyo ladagaallanka Xagjirnimada" waxaana shirkaas maalgelinaya Ururka OIC iyo qaar kamid ah hay'adaha Q.Midoobay.
Wadaada xumayaal ka socda dowladaha dawaaqiidda caalamka ayaa madasha soo xaadiri doono iyo qaar kamid ah wadaada xumayaasha Soomaalida ee ufatwooda AMISOM iyo Dowladda Federaalka.
Goobta shirku ka dhici doono waxaa lagu gedaamay ciidamada AMISOM iyo ciidamo kale oo ilaaliya ammaanka xarumaha Hay'adaha UN-ka ee magaalada Muqdisho.
Dowladda Federaalka waxay sheegtay in shirka ay soo xaadiri doonaan 30 kamid ah wadaadada ufatwooda dowladaha Carabta iyo 12 kamid ah xubnaha dowladaha ku bahoobay Ururka OIC.
Shirkan ayaa diiradda lagu saarayaa sidii dacaayaad loogu furi lahaa halganka jihaadiga ah ee ka socda dalka Soomaaliya kadib markii ciidamada shisheeye ay ku fashilmeen duulaankii ay dalka kusoo qaadeen waqti hadda laga joogo 12 sanadood , waa isku day kale oo lagu doonayo in sharciyad lagusiiyo dhul boobka lagu hayo dalka.